Xarrakatul Shabaab oo toogasho ku dishay mid ka mid ah askarta AMISOM ee ka socda Burundi | raascasayrmedia.com
← Cutub ka mid ah ciidammadii Sheekh Maxamed Siciid Atam oo isku dhiibay dowladda Puntland
Kummaanaan Qoxooti Soomaaliyeed ah oo mudaaharaad ka dhigay xarunta Baksitaan ee Islaamabaad →
January 14, 2011 · 8:35 pm
Xarrakatul Shabaab oo toogasho ku dishay mid ka mid ah askarta AMISOM ee ka socda Burundi
Askari u dhashay dalka Burundi, oo ka tirsanaa ciidammada AMISOM ee ka howlgala Soomaaliya, ayay xoogag taabacsan Xarrakatul Shabaab ku dileen magaalada Muqdisho toddobaadkan, sida waxaa arbacadii todobaadkan sheegay afhayeenka ciidammada Burundi Col. Gaspard Baratuza.
“Waxaa, askariga lagu dilay weerar gaadmo ah oo lagu qaaday Isniintii, xilli uu shaqo ku jiray, waxaana lagu furay rasaas isdaba-joog ah, taasoo sababtay inuu si deg-deg ah ku dhinto,” ayuu yiri Col. Bataruza, oo saxaafadda kula hadlay caasimadda Burunid ee Bujumbura.
Afhayeenku, wuxuu sheegay in maydka askariga Burundi u dhashay in Muqdisho laga qaaday, lana geeyay caasimadda Uganda ee Uganda, iyadoo isla maanta oo Jimco ah lagu wado in lagu aaso qubuuraha magaalada Bujumbura ee caasimadda dalka Burundi.
“Nidyad-jab naguna ridayo askariga la dilay. Waxaan Soomaaliya u joognaa sidii aan uga shaqeyn lahayn soo celinta nabadda, waxaana ka howlgalaynaa dalal kale haddii loo baahdo,” ayuu yiri afhayeenka ciidammada Burundi.
“Waan la soconnnaa in halkaas (Soomaaliya) ay khatar ka jirto, ayna ka dhici karaan dhacdooyinka noocan oo kale ah. Si kastaba ha ahaatee, mararka qaarkood aad ayay u adag tahay in la iska ilaaliyo weerarrada gaadmada ah ee Al-shabaab ay qaadayso, waayo waxay kaa toogan karaan meel fog. Aad ayaana uga xunnahay wixii dhacay Isniintii toddobaadkan,” ayuu yiri Col. Baratuza.
Dhowr jeer oo hore, ayay xoogagga Xarrakatul Shabaab weerarro ku qaadeen ciidammada AMISOM ee ku sugan Muqdisho, iyagoo isku dayay inay xoog uga saaraan ciidammada Uganda iyo Burundi dalka Soomaaliya, balse taas uma aysan suurogelin.
Xarrakatul Shabaabul Mujaahidiin, ayaa horay ugu hanjabtay inay weerarro ku qaadi doonaan caasimadaha dalalka ay ka socdaan ciidammada AMISOM. Iyagoo hajabaaddii ugu dambeeyay jeediyay sannadkii lasoo dhaafay.
Ciidammada AMISOM, ee ku sugan Magaalada Muqdisho, ayaa waxay tiradoodu gaaraysaa 8,000-askari, kuwaasoo ka socda dalalka Burundi iyo Uganda, waxaana Xarrakatul Shabaab ay horay u dileen ciidammo badan, kaddib markii ay ku qaadeen weerarro gaadmo ah iyo kuwo toos ah.
Bishii July ee sannadkii 2010, ayay Xarrakatul Shabaab waxay ka fuliyeen weerarro qaraxyo magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda, kuwaasoo ay ku dileen 76-qof oo daawanayay ciyaaro kubadda ah, iyagoo sheegay inay ugu aargudeen dadka ay AMISOM ku laynayaan Muqdisho.